ekhaya / Bible / YeVangeli kaMateyu / ch 2 Matthew
2:1 Kwaye, xa uYesu uzelwe eBhetelehem yakwaYuda, ngemihla ukumkani uHerode, khangela, Izazi zivela empumalanga kufika eYerusalem,
2:2 bathi: "Uphi na lo uzelweyo, ukumkani wamaYuda? Kuba sibone inkwenkwezi yakhe empumalanga, yaye size ukuba ndimnqule kuye. "
2:3 Ke kaloku ukumkani uHerode, ukuzwa le, ephazanyiswa, nayo yonke iYerusalem naye.
2:4 Kwaye wahlanganisela ndawonye zonke iinkokheli zababingeleli, kunye nababhali babantu, wacebisana nabo ukuba apho uKristu wayeza kuzalelwa.
2:5 Bathi ke bona kuye: "EBhetelehem yelakwaYuda. Kuba ngoko kubhaliwe kwathiwa yi umprofeti:
2:6 'Kwaye wena, Bethlehem, ilizwe lakwaYuda, Akunguye nakanye omncinanana phakathi kwabalawuli bakwaYuda. Kuba kuwe kuya kuphuma umlawuli oya kukhokela abantu bam amaSirayeli. ' "
2:7 ke uHerode, ngokuzolileyo ubiza izazi, ngenkuthalo bafunda kuzo ixesha lokubonakala kwenkwenkwezi leyo kubo.
2:8 Nokuthumela nabo ukuya eBhetelehem, uthe: "Hamba uye ngenkuthalo ubuze imibuzo malunga umfana. Xa ke nithe namfumana, nilizise kum, ukuze I, kakhulu, ukuze beze kwaye ndiyamhlonela kuye. "
2:9 Bathe ke bakuba bemvile ukumkani, Bahamba. kwaye qaphelani, inkwenkwezi leyo zayibonayo empumalanga izandulela, kuze kube, ukufika, Wama phezu kwendawo abekuyo umntwana lowo.
2:10 ke, kokubona inkwenkwezi, baye ndibavuyise yi uvuyo olukhulu kunene.
2:11 Nokungenisa ekhaya, bafumana lomfana unina uMariya. Kwaye, ngobuso owela, ke waqubuda kuye. Zavula amagugu zabo, ke yena wanikela izipho: igolide, yempepho, nemore.
2:12 Ke kaloku bafumana impendulo buthongo ukuba zingabuyi ziye kuHerode, zemka ngayimbi indlela ukuya ezweni lakowazo.
2:13 Kwaye emva kokuba bemkile, khangela, isithunywa seNkosi sibonakala ephupheni kuYosefu, bathi: "Vuka, uthabathe inkwenkwe kunye nomama wakhe, usabele eYiputa. Nihlale ke khona apho ndide ndikuxelele. Kuba kuya kwenzeka ukuba uHerode uhlalele ukumfuna umntwana lowo, ukuba amtshabalalise. "
2:14 Ubuye uvuke, wathabatha umntwana nonina ebusuku, waza wemka waya eYiputa.
2:15 Waza wahlala khona, wada wabhubha uHerode, ukuze kuzaliseke okwathethwayo yiNkosi ngomprofeti, bathi: "Aphume eYiputa, Ndambiza unyana wam. "
2:16 ke uHerode, ebona ukuba sele akucele ukuba izazi, waba nomsindo kakhulu. Ke ngoko wathumela ukuba kubulawe onke amakhwenkwe abaseBhetelehem, nakuyo yonke imida yayo yonke, ukususela kwiminyaka emibini ubudala nangaphantsi, ngokuvumelana nexesha ukuba ufundile ngokumbuza abavumisi ngeenkwenkwezi.
2:17 Ngoko kwazaliseka oko kwakuthethwe ngomprofeti uYeremiya sazaliseka, bathi:
2:18 "Ilizwi liviwe eRama, isililo esikhulu, belila: URakeli elilela abantwana bakhe. Kwaye yena akazange avume ukuba yaxola, ngenxa yokuba abasekho. "
2:19 ke, xa uHerode wayengasekho, khangela, isithunywa seNkosi sibonakala ephupheni kuYosefu eYiputa sisithi,
2:20 bathi: "Vuka, uthabathe inkwenkwe kunye nomama wakhe, uye ezweni lakwaSirayeli. Kuba abo babefuna umphefumlo inkwenkwe zigqithile. "
2:21 Esukile, wathabatha umntwana nonina, waza waya elizweni lakwaSirayeli.
2:22 ke, kokuva ukuba uArkelawo wayelawula kwelakwaYuda esikhundleni sikayise uHerode, woyika ukuya khona. Zathi, kuba zihlatyelwe ephupheni, wemka waya kumacala elaseGalili.
2:23 baye kufika, wahlala kwisixeko esibizwa ngokuba Nazareth, ukuze kuzaliseke oko kwakuthethwe ngabaprofeti: "Kuba uya kubizwa ngokuba ngumNazarete."